Aya ndiwo mabudiro anoita Apple's Campus 2 | IPhone nhau
Aya ndiwo mabudiro anoita Apple's Campus 2
Kubva kuvakwa kweApple Campus 2 kwatanga, YouTuber Mathew Roberts akaburitsa yakazara dhoni-yekuona vhidhiyo mwedzi wega wega watinogona ona mashandiro akaita shanduko. Mumavhiki ekutanga ekuvaka, mabasa akachinja nekukurumidza kupfuura zvazvino, nekuti parizvino mabasa arikutarisa pakupedzwa kwekunze nekunze kwezvivakwa, pamwe nekuiswa kwenhamba huru yemasolar solar neiyo iyo kambani inoda kupa zvivakwa zveCampus 2.
Sezvatinogona kuona muvhidhiyo, mazhinji ezuva ezuva ari muchikamu chepamusoro chechivakwa chechitenderedzwa uko isu tinogona zvakare kuwana nzvimbo dzisina mapaneru ezuva, nzvimbo idzo parizvino hatizive kuti dzichashandisirwa chii. Asi kupihwa ukuru hweCampus 2, Apple inotarisira kukwanisa kuwana 75% yesimba rinodiwa, nepo mamwe ese achizowanikwa kubva kumakambani ekunze ane minda yemagetsi ezuva.
Asi kwete chete chivakwa chikuru chakafukidzwa nesolar panels, asi iyo kambani yanga ichidawo kutora mukana wekupaka nzvimbo kuwedzera mwenje wezuva uye nekudaro kukwanisa kuwana simba rakawanda rekuchengetedza zvivakwa.
Iyo 100.000-mita-tsoka tsoka yekurovedza nzvimbo inowanikwa chete kune vashandi ikozvino yakwana. Imba yacho, uko Apple ichabata mharidzo dzinotevera dzakaderera, iri kuvharwa kumusoro. Humba iyi ichave inokwana vanhu vanopfuura chiuru. Mazhinji ekuvharira ekunze achafukidzwa nemagirazi egirazi akapindirwa akaunzwa kubva kuGerman uye akagadzirwa zvakajeka kuAppus's Campus 2.
Iwo mabasa ane pwongorora kupedzisa gore risati rapera kana kutanga kwegore rinouya Uye ndopaya apo Apple ichatanga kufambisa vashandi vayo vanopfuura 13.000 kuzvivakwa zvitsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Aya ndiwo mabudiro anoita Apple's Campus 2
Mimpi Zviroto, kurarama zviroto zvembwa mune app yevhiki